China i-keybox-48 Hot Sales Security Key Holder mveliso kunye nabathengisi | Indawo yokuhlala
Ukhuseleko lwezitshixo zakho
Khusela izitshixo zakho njengoko zilawula ukufikelela kwiindawo ezibalulekileyo kunye nezinto ezinexabiso eliphezulu. Xa izitshixo zilawulwa ngcono, iiasethi zakho ziya kukhuseleka kunangaphambili.
I-793 x 640 x 200 mm
Yinkqubo yolawulo ekrelekrele netekhnoloji yale mihla yokuhlela amaqhosha emihla ngemihla kunye nexabiso. Unokulandela imeko nganye yezitshixo ngqo ukuze zonke izitshixo zilawulwe ngobukrelekrele. Yindlela elungileyo yokukunceda usombulule iingxaki eziphambili zolawulo. Ukusuka kukhetho olulula olukhuselekileyo lokugcina kwinqanaba lolawulo lwezixhobo ezineendleko okanye ezibuthathaka, ibonelela ngendlela enobuchule nenamandla yokulawula, ukulandelela kunye nokunika ingxelo ngokusetyenziswa kweyona asethi ibalulekileyo.
Iqhosha lesitshixo 48
Iphasiwedi, ikhadi leRFID, ukubonwa kobuso
Inani Of Slot Key
Ukuphindaphinda kweTek Key
Izinto eziPhambili zeTag
1.Ukufikelela ngephasiwedi, iminwe yeminwe, kunye nekhadi lokufikelela kwiRFID kulula ukuthatha nokubuyisela izitshixo.
2. Ukulawulwa kogunyaziso kwaye ngokuzenzekelayo kuvelise iirekhodi zokuthatha, ukunciphisa umngcipheko kunye neendleko zolawulo, ukuphucula ukusebenza kakuhle komsebenzi.
3. Iglasi ye-PMMA okanye ucango olungenantsimbi ukwenza amaqhosha akhuseleke.
4. Izitshixo ziphantsi kolawulo ngehardware kunye nesoftware, isebenza ngokulula.
5. Idityaniswe nenkqubo yolawulo lokufikelela.
6.Yamkela i-CPU ezimeleyo kunye neFlash, uyilo lwebhasi esekwe kuyilo, inkangeleko entle kwaye usebenzise indawo encinci.
Abantu ngaphandle kwemvume abakwazi ukufikelela kwisitshixo.
Isitshixo ngasinye luxanduva lomsebenzisi ogunyazisiweyo kuphela.
Oku kuthetha ilahleko engaphantsi kwesitshixo kunye nelahleko yempahla ngempazamo.
Abasebenzisi abagunyazisiweyo banokufumana kwaye bathathe izitshixo nangaliphi na ixesha, oko kuthetha ukuba iindleko zabasebenzi ezincinci kunye nokuxhomekeka okuphantsi. Ngokujonga imbali yokufikelela, unokulugcwalisa ngokulula ulawulo oluphambili.
Inkqubo ngokuzenzekelayo irekhoda ukusetyenziswa kweqhosha ngexesha lokwenyani, ukubonelela ngeerekhodi zokufikelela kunye neengxelo. Ngokujonga ukufikelela kwimbali, unokuhlala ufumana ulwazi lwamva nje.
Inkqubo iyahambelana kwaye inokudityaniswa kulawulo lokufikelela kwinkampani, ukubeka esweni, ukubakho, i-ERP kunye nezinye iinkqubo zokuphumeza inkqubo yenethiwekhi.
Ungaqwalasela ngokulula izitshixo ngenkqubo yesoftware kwaye usete ukude imvume yabasebenzisi. Ukulawulwa kwe-Intanethi kunye nemibuzo kunceda ukunciphisa iindleko kunye nokunyusa ukusebenza.
Inkqubo yoLawulo lweeNdawo eziPhambili zeLandwell inokuba semgangathweni okanye ilungiselelwe ukuhambelana neemfuno zabathengi abahlukeneyo. Imodyuli engundoqo kunye nemodyuli yokugcina inokudityaniswa kwinkqubo enye.
i-Ibhokisi ephambili 8
Ibhokisi ephambili yebhokisi-48
i-Ibhokisi yezitshixo 64
Ibhokisi engundoqo ye-i-100
Ibhokisi engundoqo ye-i-200
Egqithileyo Ixabiso leVenkile eChina iTshayina eKhiyekileyo eKhiyekileyo- eLandwell
Okulandelayo: IKhabhinethi yokhuseleko lwe-H3000 ye-H3000
Inkqubo Encryption yoLawulo
Inkqubo yoLawulo lweeFleet eziphambili, iiNkqubo eziPhambili zoLawulo lwePropati, Inkqubo yoLawulo lweeNgcaciso zeZithuthi
Office & Service Self Service Keys Machine w ...
IKhabinethi ephambili etshixwayo, IKhabhinethi Yolawulo Oluphambili, Inkqubo yoLawulo lwebhokisi encinci kunye nesitshixo, IKhabhinethi eKhulu yokuGcina, Ibhokisi yoKhiye woLawulo, Ibhokisi ephambili ejingayo,